Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » NewTree Ranch dia manomboka ny famandrihana famandrihana manome toeram-pitrandrahana maharitra azo itokisana izay misy ny fitsangatsanganana sy ny fahasalamana
NewTree Ranch, toerana tsy manam-paharoa ho an'ny mpizahatany mitady traikefa ara-pahasalamana sy toerana itadiavana tontolo iainana, dia manaiky famandrihana maharitra ary koa famandrihana fialan-tsasatra efatra sy enina alina hipetrahana manomboka amin'ny 1 Jolay 2020. Ao amin'ny ala Redwood Pasifika an'ny Kalifornia Avaratra, ilay toeram-piompiana biodinamika dia mkahita ho an'ny saina, vatana ary fanahy, ahafahan'ny vahiny miala sasatra, mamelombelona ary mahita ny fahalianany anaty amin'ny alàlan'ny fanolorana fanasitranana sy fanomezana an-kalamanjana any ivelany. Rehefa niova tanteraka ny kolontsaintsika mba hifantoka amin'ny fahasalamana, ny tontolo manodidina ary ny fananganana fiovana tsara eto an-tany, dia dinihin'ireo mpandeha ny atao hoe vakansy mety. NewTree Ranch dia manolotra ny toerana lavorary, mitondra fomba ara-panahy-etika-ekolojika hitsangatsangana sy hiaina traikefa ho an'ny vahiny.
"Mino aho fa tsy safidy ny fifandraisantsika amin'ny natiora, fa ilaina izany ary mamporisika ny olon-drehetra aho hitady ny azy ireo," hoy i Ed Newell, mpanorina sy tale jeneralin'ny NewTree Ranch. "Ny NewTree Ranch dia manome ny mpitsidika ny fotoana ahafahany mieritreritra ny fomba fampiraisan'izy ireo ny tontolo iainana. Ny fomba nentim-paharazana amin'ny dia maharitra nifantoka tamin'ny fomba hampihenana ny fiatraikany ratsy ateraky ny asan'ny olombelona amin'ny harena voajanahary. Saingy, ao amin'ny NewTree Ranch, tsy mifantoka amin'ny fanamaivanana ny fahasimbana fotsiny izahay, fa amin'ny fikolokoloana sy ny fanasitranana ny tenanay sy ny tontolo iainana. ”
Toerana fialantsasatra bebe kokoa
Ny toerana tsy manam-paharoa an'ny NewTree Ranch ao amin'ny ala Redwood Pasifika amin'ny velaran-tany 120 hektara dia mamela ny mpitsidika hihataka lavitra amin'ireo toeram-pialofana be olona sy hifandray amin'ny natiora, manome ny vahiny ny fandosirana an-tsokosoko avy ao anaty korontana sy fiainana feno haingam-pandeha.
Ny fisokafan'ny toeram-piompiana dia manasaraka ny vahiny amin'ny tontolo ivelany ary mamela azy ireo hifandray am-pahatsorana any ivelany sy hiaina mitovy hevitra amin'ny natiora rehefa mianatra ny fomba fivelomana ny tany ary mampihatra fiainana velona sy maharitra. Ny akaikin'ny toeram-piompiana amin'ny vondrom-piarahamonina mahafinaritra ao afovoan-tanàna Healdsburg dia ahafahan'ny mpitsidika miaina orinasa mpamokatra divay lehibe indrindra eto an-tany, trano fisakafoanana misy kintana Michelin, fitsangantsanganana an-tongotra sy lalan-tongotra ary fahagagana voajanahary izay atolotry ny toerana itobiana divay malaza.
"Rehefa akaiky anao izao tontolo izao, ary tsapanao fa mihodina tsy voafehy izany dia tonga ny fotoana hitodianao any NewTree Ranch!" nanambara ho vahiny vao tsy ela akory izay. “Toerana mahafinaritra sy mahatalanjona tokoa ity misy zavatra ianarana betsaka ity. Miala sasatra ianao ary miaraka amin'ny fomba fijery vaovao momba ny fomba hahazoana antoka fa manao ny tsara indrindra ho an'ny tenantsika sy ny planetantsika isika. ”
Ezaka maharitra izay miteraka fiatraikany
Miaina sy miaina maharitra ny NewTree Ranch, miaraka amin'ny fahafaha-manome loharanon-kery ho azy manokana, rano, sakafo avy amin'ny zaridaina biodynamika sy mpiasa eo an-toerana, izay mipetraka sy miasa eo amin'ny toeram-piompiana. Amin'ny alàlan'ny fampiharana fambolena mikatona, famerenana otrikaina ary akora biolojika miverina amin'ny tany nitomboany tany am-boalohany, NewTree Ranch dia mitazona ny haavon'ny otrikaina sy ny karbaona ao anaty ny tany ary mamela ny fambolena hatao maharitra. Ny tsy fisian'ny fampiasana simika dia miantoka fa tsy misy poizina avoaka amin'ny tany na ny tontolo iainana, miaraka amin'ny tany sy rano rehetra izay notsapaina tsy tapaka mba hiantohana ny tsy fisian'ny fanafody famonoana bibikely sy ny simika. NewTree Ranch dia mampianatra sy manentana ny vahiny hiaina fiainana maharitra kokoa amin'ny alàlan'ny fisehoan-javatra miavaka, avy amin'ny fahalalana ny andraikitry ny biby fiompy amin'ny fanohanana ny tontolo iainana manan-danja ka manome ny vahiny ny fotoana hiroboka amin'ny lafiny maro amin'ny toeram-pambolena biodinamika miaraka amin'ireo tantsaha manam-pahaizana. rehefa mampianatra ny vahiny momba ny fanomanana biodinamika, ny fananganana compost, ny permaculture, ny fambolena indray ary ny fambolena mpiara-miasa izy ireo.
Fandraisana sy fampitaovana tsy manam-paharoa
NewTree Ranch dia manaporofo fa ny faharetana sy ny fahasalamana dia tsy mila manimba ny traikefa mahafinaritra. Ireo mpitsangatsangana mahaliana dia miditra amin'ny tontolo hafa rehefa hiditra ao amin'ny The Ranch Estate ao amin'ny NewTree Ranch, miaraka amin'ireo trano honenana misy efitrano fandraisam-bahiny efatra matory vahiny valo mihoatra ny mahazo aina. Ny Ranch Estate dia voaravaka haingon-trano amam-borona ankehitriny, mampiseho sary an-tsary tsy manam-paharoa avy amin'ny mpaka sary sy mpanakanto ao an-trano, loko marevaka, lokon'ny tany ary accents hazo manankarena. Ho an'ireo vahiny maniry ny hisitraka alina milamina eo ambanin'ny kintana ary hanaiky ny eny ivelany, NewTree Ranch dia manolotra traikefa "manjelanjelatra", misy tranolay lamba rongony mihaja izay afaka matory ho an'ny mpivahiny roa ary manana koveta mandroboka any ivelany, fatana mandoro kitay. sy seza fandraisam-bahiny. Manompo amin'ny maha toeram-pivoriana farany ho an'ny namana, fianakaviana ary mpiara-miasa aminy, The Ranch Estate dia manana lakozia matihanina feno entana sy fantsom-bozaka feno fahitana momba ireo hazomalahelo manodidina ny faritra iainana lehibe.
Fanamafisana ny fahasalaman'ny zavamaniry sy ny fiadanam-po
NewTree Ranch dia niorina tamin'ny finoana, "Ny fiainana an-tany dia traikefa mandritra ny fiainana ary afaka manome aingam-panahy fomba fiaina ara-panahy, etika ary ekolojika amin'ny fiainana." Miaraka amin'ny fepetra ara-pahasalamana any ambony sy any an-dafin'ny mpitsidika nentim-paharazana, NewTree Ranch, ohatra, dia tsy mampiasa afa-tsy vokatra fanadiovana voajanahary rehetra mandritra ny fe-potoana fanadiovana roa andro alohan'ny fahatongavan'ireo vahiny. Ny toeram-piompiana dia nanapa-kevitra ihany koa fa hanaraka ny sakafon-javamaniry. Chef Matteo Silverman dia mpahandro fanta-daza voaofana sy miompana amin'ny NewTree Ranch izay miompana amin'ny famoronana sakafo tsy manam-paharoa sy zavamaniry mifantoka amin'ny foto-kevitra momba ny fiompiana misy tabilao vaovao sy vanim-potoana izay eo an-toerana, voajanahary ary mitombo maharitra. Ny sakafony mahafinaritra paleta dia mampiditra tsiro avy amin'ny kolontsaina isan-karazany manerantany. Tsy kivy izy raha ny amin'ny fisorohana ny sakafo voahodina sy ny fonosana, mahatonga ny singa rehetra tsy ho voadidy.
Ny fialan-tsasatra maharitra iray volana dia misy kilasy fandrahoan-tsakafo an-tsokosoko miaraka amin'i Chef Silverman ary koa fisakafoanana antoandro na sakafo hariva any an-tsaha any NewTree Ranch nomanin'i Chef Silverman . Ny fialan-tsasatra efatra alina dia misy koa fisakafoanana antoandro na sakafo hariva antoandro ary fisakafoanana enina alina dia misy sakafo atoandro na sakafo hariva, ary koa kilasy fandrahoan-tsakafo miaraka amin'i Chef Silverman.
Fahasalamana hafa sy fanandramana mpitsidika mifantoka amin'ny tontolo iainana
NewTree Ranch dia manasongadina ekipa manana talenta eo an-toerana izay manome fidirana amin'ny fandaharana isan-karazany izay miresaka amin'ny mpitsangatsangana, ara-pahasalamana ary mahatsiaro tontolo iainana amin'ny fikatsahana traikefa miavaka sy fahatsapana fiarahamonina. Anisan'ireny traikefa mifameno ireny ny fiompiana biodamika, ny fakana voninkazo sy ny fikarakarana, ny fitsangatsanganana voajanahary, ny filomanosana, ny fipetrahana kayak ary ny kayak ao amin'ny farihy Andreas, ny fanaovana dite, ny fiotazana voankazo ary ny legioma ary ny safidy hatory eo ambanin'ny kintana ao amin'ny laozin-tanin'omby. Ho fanampin'izay, ny vahiny dia afaka mamandrika mpikaroka momba ny fanovana indray mandeha indray mandeha, toy ny The Wim Hof ​​Experience, izay vao haingana no nitombo ny lazany teo ambanin'ny fanasongadinana ny rakitsoratr'i Netflix “Goop Lab.” Amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoanan'ny toeram-piompiana dia manana safidy ny vahiny hisafidy ireo dia manokana namboarina manokana, manomboka amin'ny famelomana ny yoga manokana sy ny fotoam-pisaintsainana, hatramin'ny fitsidihana fanandramana divay ao amin'ny Tesla Model X ao amin'ny toeram-piompiana sy kilasy fandrahoan-tsakafo miaraka amin'i Chef Silverman olo-malaza.
"Ity dia toerana ho an'ireo izay te-hiala aminy rehetra, mankafy ny fandriampahalemana sy ny fahanginan'ny natiora, nefa mbola manana ny lafy madinidinika tadiavinao avokoa", hoy ny vahiny iray taloha. "Manoro hevitra an'i NewTree aho ho an'izay te hiala sasatra, hifandray indray ary hankafy ny fiainana."
New Tree Ranch dia mijanona ao amin'ny 3600 Wallace Creek Road ary ankehitriny dia mandray famandrihana ho an'ny fialan-tsasatra lavitra sy maharitra. Raha mila fanazavana fanampiny sy hamandrihana famandrihana dia tsidiho azafady https://newtreeranch.com/book-a-stay/, mailaka [email voaaro] na miantso (707) 433-9643.